MUQDISHO, Soomaaliya - Dabley bastoolado ku hubeysan ayaa saacadihii hore ee maanta oo Arabco ah ku dishay magaaladda Muqdisho kamid kamida Macalimiinta Dugsiyada Qur'aanka Kariimka.
Dilkan oo aad looga naxay ayaa ka dhacay xaafadda Buundooyinka ee degmada Waaberi kadib markii labo dhalinyaro ah oo bastoolado watay ay madaxa ka toogteen Macalinka xilli uu kusii jeeday Dugsigiisa Qur'aanka oo halkaasi ku yaalla.
Kuwa falka dilka ah geystay ayaa goobta si nabad ah uga baxsaday, iyadoo sida caadada ah ay halkaasu gaareen daqiiqada badan kadib ciidamada dowladda Soomaaliya, oo sameeyay howlgal aan cidna lagu soo qaban.
Lama oga sababta Macalinka loo dilay iyo cida ka dambeysa, balse dhacdadan ayaa noqonaysa mid kamid ah kuwa ku cusub dhegaha shacabka Muqdisho.
Muqdisho, oo ah xaruntii dowladda Federaalka ayaa dhacaya dilal joogto ah iyo qaraxyo, iyadoo ciidamo badan oo boolis ah ay wadooyinka ku sugan yihiin.
Mid kamid ah Saraakiisha sare ee CID-da ayaa xalay ku dhaawacmay qarax loogu xiray gaarigiisa oo ka dhacay nawaaxiga KM-4, halkaasi oo kamida meelaha sida aadka amnigooda loo ilaaliyo.
Dabley hubaysan ayaa labo Askari oo katirsanaa ciidamada dowladda ku dilay Muqdisho...
Soomaliya 27.05.2018. 23:07
Nin Muqdisho ku dilay 4 qof oo ka mid ah Qoyskiisa, isna is-dilay
Soomaliya 05.05.2018. 21:16
Ganacsade lagu dilay Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 09.12.2018. 13:10